Gmail: Sida loo abuuro farriimaha otomaatiga ah ee tooska ah ee ka socda Android | Androidsis
Dad badan xilliga fasaxa ayaa hadda u bilaabmaya. Maalmahan, waxaad dooneysaa inaad ka jarto oo aad uga feejignaato taleefanka sida ugu macquulsan. Sidaa darteed, waad ku sharxi kartaa gab wargelinta telefoonka iyo sidan oo kale inaad ku nasan karto App aan inta badan kala tashanno casrigayagu waa Gmail. Iskusoo wada duuboo waxaa jira dad aad ugu adeegsada shaqada.
In kastoo laga yaabo inaadan rabin inaad isha ku hayso Gmail waqtigan. Taas awgeed, waad cdib u habee farriimaha otomaatiga ah ee akoonkaaga. Marka qofkasta oo wax kuu soo qoraa wuxuu helayaa jawaab u sheegta inaad fasax ku jirto oo aan la heli karin waqtigan.
Fariimaha jawaabta otomaatiga ah waa muuqaal aad u faa'iido badan. Maaddaama ay u oggolaanayaan dadka in lagu wargeliyo in aanan diyaar ahayn, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa fasax, tusaale ahaan. Marka lagu daro u oggolaanshaha u gudbinta dadka kale. Xisaabta koontada shaqada, waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano farriin ugu dir cinwaan gaar ah. Waxa ugu wada fiican, waxaan ka abuuri karnaa noocyadan farriimo sidoo kale taleefankayaga Android, adoo adeegsanaya barnaamijka taleefanka ku jira.
Sida loo abuuro jawaabo deg deg ah oo ku saabsan Android
Abuur jawaabo otomaatig ah Gmail
Si loo abuuro fariin otomaatig ah oo fariin u ah Gmail, waa inaan marka hore furo arjiga taleefankeena Android. Markaad ku dhexjirto arjiga waa inaanu fureynaa dhiniciisa menu. Meesha dhinaceeda waxaan ka helnaa dhowr ikhtiyaar, oo aan xiiseyneyno inaan galno goobaha codsiyada. Xulashadani waxay ku taal dhammaadka menu-kan.
Markaan galno goobaha, waxa ugu horeeya ee nala weydiisto waa inaan doorano koontada. Waa inaad doorataa koontada aadan qorsheyneynin inaad u isticmaasho fasaxan, kaas oo aad rabto inaad u abuurto jawaabahan otomatiga ah. Markaa haddii ay tahay xisaab shaqo, waa inaad gujisaa emaylka la xiriira koontadaas. Guji cinwaanka e-mayl ee la yidhi oo geli qaybta dejimaha ee loola jeedo koontada la yidhi.
Waa inaan ku dhex dhexgalnaa iyaga ilaa aad ka gaarto qeybta jawaabta otomaatiga ah. Kadibna waxaan gujineynaa, si uu uga furmo daaqad cusub. Waxa ugu horreeya ee ay Gmail inna weydiin doonto waa inay ku shaqeysiiso hawsha arjiga. Markaan dhaqaajino, waxaan ku bilaabi karnaa qaabeyntiisa. Dareenkaan, waxaan haynaa dhowr qaybood oo aan ku buuxino:
Taariikho: Waxaa nalaga codsaday in aan galno taariikhaha bilowga iyo dhamaadka ee isweydaarsigan. Waxa macquulka ah waxay noqon laheyd inaad ku isticmaasho Gmail intaan fasax ku jirno. Marka gali taariikhahaas markaad ogtahay inaadan la tashan doonin koontadan.
Mawduuca: Waxaad soo gali kartaa Mawduuc, sida midka aan isticmaalno marka aan sameysano emayl adoo adeegsanaya arjiga. Tani waa wax ay tahay in qof kastaa doorto haddii uu u arko inay khuseyso. Waxaan ku ridi karnaa wax sida fasax oo kale ah, ama "ma ihi la heli karo." Wax sharxaya in aanan la heli karin.
fariin: Tani waa nuxurka, jawaabta otomaatiga ah ee qofka noo qoraya uu helayo. Waxa caadiga ah ee kiisaskan waa in la yiraahdo waxaan ku jirnaa fasax ama banaanka xafiiska, inta udhaxeysa taariikhaha qaarkood. Sidoo kale haddii aad wax rabto, la xiriir qof ama qayb ka mid ah shirkaddayada. Waxaan u dhigi karnaa cinwaan emayl ama lambar taleefan tan, si ay ula xiriiraan qofkan si ay ugu sii wadaan waxa ay u baahan yihiin. Muhiim u ah arrinta macaamiisha shirkadda.
Marka qaybahaan la buuxiyo, waxaan horey u abuurnay jawaabta otomaatiga ah ee aan rabno inaan ku isticmaalno Gmail. Codsigu wuxuu noo ogolaanayaa ikhtiyaarka ugu dambeeya, oo ah haddii aan rabno inaan u dirno farriintan kaliya xiriirada ama cid kasta oo noo soo qorta fariin. Waxay kuxirantahay midkastoo iyo isticmaalka koontada lasiiyay. Markii aan calaamadeynay doorashadan, waa inaan gujino aqbalaadda shaashadda dusheeda. Sidan oo kale, jawaabta otomaatigga ah ayaa loo sameeyay waxayna ku shaqeyn doontaa taariikhaha aan calaamadinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loogu abuuro farriimaha otomaatiga ah ee fariimaha ee Gmail ka yimid Android
Qaar ka mid ah noocyada Samsung Galaxy A30s ayaa ka soo muuqday Geekbench ka hor inta uusan iftiinka maalinta arkin